Al shabaab oo lawareegay gacan kuhaynta deegaanka Busaari ee Gobalka Gedo - Muqdisho Online
Home News Al shabaab oo lawareegay gacan kuhaynta deegaanka Busaari ee Gobalka Gedo
Wararka laga helaayo deegaanka Buusaar ee Gobolka Gedo ayaa waxa ay ku waramayaan in saakay waaberigii hore ay ciidamada Kenya isaga baxeen deegaankaas oo muddo dhawr sano ah ay ku sugnaayeen.
Dadka deegaanka ayaa waxaa ay sheegeen in kaliya ay saakay arkeen Ciidamada Kenya oo isaga baxaya Saldhigyadii ay ku lahaayeen deegaanka Buusaar, kuwaas oo aaday dhinaca Degmada Ceelwaaq ee isla Gobolka Gedo.
Saraakiisha Ciidamada Kenya wali ma shaacin sababaha ay deegaankaas uga baxeen, hayeeshee waxaa xusid mudan in Ciidamada Kenya 2-dii Bishaan Maarso ay isaga baxeen deegaanka Faafax dhuun, islamarkaana ay la wareegeen Al-Shabaab.
Wararka ayaa waxaa ay intaasi ku darayaan in markii ciidamada Kenya ay ka baxeen deegaanka Buusaar ay durba la wareegeen Al-Shabaab oo ku sugnaa meel aan ka fogeen deegaankaas oo ka mid ah deegaanada muhiimka ah ee Gobolka Gedo.
Maamulka deegaanka Buusaar ayaa horay u sheegay in Ciidamada Kenya ay dhawaan ka bixi doonaan deegaankaas, hayeeshee aysan faah faahin ka bixin sababta ka dambeysa,waxaana jira in deegaano kale ay qorsheynayaan inay ka baxaan Ciidamada Kenya ee qeybta ka ah Amisom
Previous articleTaliyaha Ciidanka Booliska dalka Jabuuti oo soo gaaray magaalada Muqdisho
Next articleFaallo: Ciidan XDS oo mushaar iyo Raashin la, aan ah iyo Qabsashada Al Shabab ee Balcad yo Dhanaane- Maxaa ku xiga? Akhriso.